MCP လုပ်ဆောင်ချက်များ - Photoshop လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် Lightroom ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ | MCP လုပ်ဆောင်ချက်များ™
Newborn Photography Photoshop လုပ်ဆောင်ချက်များ
မရှိမဖြစ် Photoshop လုပ်ဆောင်ချက်များ
အနုပညာ Photoshop လုပ်ဆောင်ချက်များ
az, AZ, 0-9, dash နှင့် underscores များကိုသာသုံးပါ။
MCP လုပ်ဆောင်ချက်များ™ PREMIUM တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်သင်ယူခြင်း
Photoshop လုပ်ရပ်များ, Lightroom ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, Overlays နှင့် texture
MCP Actions ™သည်ယနေ့သင်၏ဓာတ်ပုံနှင့်တည်းဖြတ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးပါ။
MCP ထုတ်ကုန်များမှာ -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးပုံတူလှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ Photoshop လုပ်ဆောင်ချက်များသည်ဓာတ်ပုံဆရာများကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံများဖန်တီးရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လျှင် MCP Actions ™ Premium Photoshop Actions သည်ပိုမိုပြတ်သားသော၊ တက်ကြွသောအရောင်များ၊ အမည်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပြောင်းခြင်းများ၊ အရောင်တောက်ပသောဓာတ်ပုံများနှင့်အနုပညာဆိုင်ရာပြုပြင်ထားသောစပျစ်သီးအစုံအလင်ဓာတ်ပုံများကိုရရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ဆောင်မှုအစုံ၊ Makeup Toolkit ပရီမီယံ Photoshop လှုပ်ရှားမှု မည်သည့်အရောင်နှင့်မဆိုသင်၏ဘာသာရပ်အားမည်သည့်မိတ်ကပ်အမျိုးအစားမဆိုအသုံးချနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်သော storyboard နှင့် template လုပ်ရပ်များသည် web သို့မဟုတ် print အရွယ်အစားရှိသော collages များကိုဖန်တီးပြီးသင်၏ပုံများကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပေးသည်။ ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်ဖြတ်လမ်းတစ်ခုပေးရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့ကိုသင့်အားထိန်းချုပ်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝ - ချိန်ညှိနှင့်အတူ Photoshop လုပ်ရပ်များ, သင်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကိုက်ညီသောကြည့်များအတွက်ရလဒ်များကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
Essentials စုဆောင်းမှု - Photoshop Actions Package
သင် Photoshop တွင်တည်းဖြတ်ခြင်းစတင်ရန်လိုအပ်သမျှ။ ဤအထုပ်တွင်ပါဝင်သည် အရေးအပါဆုံး Photoshop လုပ်ဆောင်ချက် ၃ ခုကို MCP ™ကကမ်းလှမ်းသည်။ သင်သည် Photoshop တွင်ဓါတ်ပုံများကိုစတင်တည်းဖြတ်နေပြီဆိုပါကကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
MCP Actions ™မူရင်း - Photoshop Actions Bundle
မူလရောင်းအားအားလုံးရယူပါ ပရီမီယံ Photoshop လှုပ်ရှားမှုအစုံ MCP လုပ်ဆောင်ချက်များ™ကကမ်းလှမ်းသည်။ စာသားအရ 14 စုစုပေါင်းအစုံအတွက်လုပ်ရပ်များထောင်ပေါင်းများစွာ ဒီအစုအဝေးကိုတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အားလုံးရှိသည်ဖို့သူဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်ကြီးသော။
မြူဆိုင်းသောနွေ ဦး ရာသီမှစပြီးရွှေနွေရာသီနေဝင်ချိန်အထိရာသီတိုင်းသည်သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုထူးခြားစွာခံစားနိုင်သည်။ ဒီအစုအဝေးနှင့်အတူ, သင်သည်တတ်နိုင် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာအရှိန်မြှင့် ထည့်နေစဉ် ကိုယ့်လက်ျာရာသီအလိုက်စိတ်ဓါတ်များ သင့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံး LIGHTROOM စျေးနှုန်းများ သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး Lightroom ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဖြင့်တည်းဖြတ်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော၊ အနုပညာလက်ရာများကိုလျင်မြန်စွာအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်သည်။
သင်ဟာအလုပ်များတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာတစ် ဦး လား၊ စိတ်အားထက်သန်တဲ့အပျော်တမ်းသမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရာနဲ့ချီတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ခြင်းသည်သင်မလိုအပ်သောအချိန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ အလင်းအိမ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များ၌ထောင်နှင့်ချီသောထူးခြားသောအသွင်အပြင်ကိုထားပါ။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်လုံးဝပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ၁၀၀% ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကိုသင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းသောထိတွေ့မှုပြင်ဆင်ခြင်းများမှသည် gritty မြို့ပြသက်ရောက်မှုများအထိကျွန်ုပ်တို့၏ Lightroom ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသည်သင်လိုချင်သောရလဒ်များကိုဖန်တီးရန်သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။ တက်ကြွသောအရောင်၊ မြို့ပြ၊ အပင်နှင့်မီးခိုးမြူများ၊ လှပသောအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်များနှင့်ရုပ်ရှင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ RAW သို့မဟုတ် JPG ဓါတ်ပုံများကိုအဖျက်အမှမဟုတ်တည်းဖြတ်ခြင်း - အဖြူချိန်ခွင်လျှာမှတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဖြည့်ပါ ၀ င်သောအလင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်၊ ဘောင်များနှင့်အခြားအရာများကိုအဆုံးသတ်ပါ။ ငါတို့ လျင်မြန်စွာကလစ်နှိပ်စုဆောင်းခြင်း နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ အားလုံးရပြီ
သင်၏ရုပ်ပုံများကိုဝဘ်ပေါ်တွင်ဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ရန်တင်ပြရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်လိမ့်မည် Lightroom Template နှင့် Storyboard Presets။ သူတို့ကဒီစိတ်ဖိစီးမှုလုပ်ငန်းများကိုတစ် ဦး လေပြေပါစေ။
လျင်မြန်စွာကလစ်နှိပ်ပါငွေကောက်ခံ™ Lightroom ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
ဓာတ်ပုံသမားစမ်းသပ်ပြီး 300 Lightroom ကြိုတင်မှာယူပါ ပစ်ခတ်မှုအခြေအနေတိုင်းအတွက်အမျိုးမျိုးနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း။ သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များ၌ထောင်နှင့်ချီသောထူးခြားသည့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိသည် လုံးဝစိတ်ကြိုက်နှင့် 100% နောက်ပြန်ဆုတ်.
အပြီးအစီး Lightroom Presets Bundle
ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးတည်းဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အနုပညာ Lightroom ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအားလုံးကိုစုဆောင်းထားသည့်သတင်းများပါ ၀ င်သည် - ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သောကြိုတင်တိုင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုထဲသို့ထည့်သည်။ အဲဒါပါပဲ စုစုပေါင်းကြိုတင် ၁၄၇၀ ခန့်သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ၈၀% ကျော်ရှိသည်။
Enlighten ™ Lightroom ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
MCP Enlighten ™တွင်ပါဝင်သည် ဓာတ်ပုံသမားစမ်းသပ်ပြီး 200 Lightroom ကြိုတင်မှာယူပါ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောအဆင့်လေးဆင့်နှင့်အစုတခုအဖြစ်ခွဲထားသည် 30 ဖြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ Lightroom တွင်သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုမသိသောအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ကိုဂရုပြုရန်။
အားလုံး Lightroom ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးပုံတူအရောင်းနှင့်အထွေထွေစာရင်းများ သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာစေသောအရောင်များ၊ အံ့သြဖွယ်အရိပ်များ၊ လှပသောအပြာရောင်ကောင်းကင်၊ နေရောင်ခြည်၊ နေရောင်ခြည်များနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ဒရာမာကိုထည့်ပါ။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ထပ် for Photoshop နှင့် Photoshop Elements များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော image files များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်လုပ်ရပ်များမဟုတ်ပါ။ ထည့်သွင်းစရာလည်းမရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် Layers များ အသုံးပြု၍ Photoshop သို့မဟုတ် Photoshop Elements ရှိဓာတ်ပုံများကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်သင်သည်သူတို့ကိုဓာတ်ပုံပေါ်သို့ဆွဲယူ။ ဆွဲတင်လိုက်သည်၊ ၎င်း၏ layer mode ကိုညှိပြီးသင်၏အရသာနှင့်အညီသေးငယ်သောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်သည်။
Photoshop နှင့် Element များအတွက် Sunshine Overlays
Sunshine Overlays ပါရှိသည် 75 ပရီမီယံထပ် Photoshop နဲ့ Elements အတွက် သင့်ဓါတ်ပုံများကိုနေရောင်ခြည်ထည့်ပါတောင်မှမှေးမှိန်ကောင်းကင်၌ပင်။ နေလောင်ခြင်း၊ နေရောင်ခြည်များ၊
Photoshop နှင့် Elements များအတွက် Sky Background Overlays
Sky Background Overlays တွင်ပါဝင်သည် 85 Hi-resolution ပုံရိပ်တွေ ကောင်းကင်ကိုအလျင်အမြန်အလွယ်တကူအစားထိုးနိုင်ပြီးအရောင်များကိုသင်၏ပြင်ပဓာတ်ပုံများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်။ မှိုင်းနေသောကောင်းကင်ပြာကိုလှပသောကောင်းကင်ပြာသို့ပြောင်းပါ။ တိမ်များသို့မဟုတ်နေဝင်ချိန်တစ်ခုပင်ထည့်ပါ။
Photoshop နှင့် Element များအတွက် Texture Play Overlays
MCP Actions ™စာသား Play Overlays အစုံတွင်ပါဝင်သည် 75 ထူးခြားတဲ့ texture ဒီဇိုင်းများ သင်၏ပုံများကိုချက်ချင်းအတိမ်အနက်နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ကွင်းများထည့်ရန်။ အသံမြည်တယ် က Pop ။ က texturize ။ သင်၏ပုံများကို Photoshop (သို့) Element များနှင့်အနည်းငယ်ပျော်ရွှင်ပါစေ။
အားလုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် Overlays စျေးဝယ်
REAL MCP ACTIONS ™ဖောက်သည်များမှစစ်မှန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ
Adobe ™သည်တည်းဖြတ်ခြင်းကိုဖြစ်နိုင်သည်။ MCP ™ကလွယ်ကူစေသည်။
"သင်၏လုပ်ရပ်များနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုများစွာပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ရလဒ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်အားစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားစေသည်၊ သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုတည်းဖြတ်သည့်အချိန်ကိုချွေတာပြီးကျွန်ုပ်သည်ငွေရှာသည်။ "
MCP သည်ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံကိုပြန်လည်ရှင်သန်လာစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များကိုစတင်အသုံးပြုချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သုံးဆရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိသောဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်သည်။
MCP ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံနတ်သမီးပုံပြင်ဖြစ်သည်။ မင်းဟာမင်းကိုရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်လှပသောပုံရိပ်များကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောယုံကြည်မှုနှင့်ကိရိယာများကိုပေးခဲ့သည်။
"ငါအရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအားလုံးကိုချွေးခဲ့ဖူးတယ်။ အခုဆိုရင် MCP Actions ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်မရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်းဖြတ်နိုင်ပြီ။ အကောင်းဆုံးကတော့ငါ့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့အချိန်ကိုငါပြန်ရပြီ!"
MCP ™လုပ်ဆောင်ချက်များသည်တည်းဖြတ်ခြင်းကိုပျော်စရာမြန်ဆန်စေပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဝါသနာရှင်များဓာတ်ပုံပညာရှင်များအတွက်လွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်ပြီး Photoshop ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် အလင်းအိမ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ သင့်ပုံများကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့် ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ Photoshop, Elements နှင့် Lightroom ကိုသင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားသည်။ မင်းတို့ရဲ့အချိန်ကိုချွေတာနေချိန်မှာမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုထင်ရှားစေနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ပါ။
သင်၏ inbox သို့ MCP Actions ™ပို့ဆောင်ပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်အထူးအစီအစဉ်များအတွက်အခမဲ့ download သတိပေးချက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောအကြံပြုချက်များနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်သင်ခန်းစာများအတွက်၊ အောက်ပါကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်သတင်းလွှာတွင်စာရင်းသွင်းပါ။
MCP Actions ™သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဝါသနာရှင်များဓာတ်ပုံပညာရှင်များကိုသူတို့၏ဓာတ်ပုံတိုးတက်စေရန်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တီထွင်ဆန်းသစ်သော Photoshop Actions နှင့် Lightroom Presets သည်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစေသည်။ MCP ™လုပ်ဆောင်ချက်များသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သောအွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်အခမဲ့ Photoshop ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများကိုပေးသည်။ မင်းတို့ရဲ့အချိန်ကိုချွေတာနေချိန်မှာမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုထင်ရှားစေနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ပါ။
4000 4th Street, Moosic PA ဆိုပြီး။ 18507
Editing Photoshop လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကိုစျေးဝယ်ပါ
အားလုံး Lightroom Presets စျေးဝယ်
အခမဲ့ Photoshop လုပ်ရပ်များ, Lightroom ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်တည်းဖြတ်ရေးကိရိယာများ
© 2019 Photoshop Actions နှင့် Lightroom Presets | MCP လုပ်ဆောင်ချက်များ™။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ထိပ်တန်းစေရန် Scroll သည်